Sidee looga Soo Kabanayaa Sawirro Dhawaan la tirtiray oo ku saabsan iPhone | Wararka IPhone
Ma ogtahay taasi waxaad ku soo ceshan kartaa sawirro ama fiidiyowyo tirtiray iPhone-ka si fudud? Ma ogtahay inta ay tahay inaad ka soo kabato dhammaan waxyaabaha la tirtiray xusuusta gudaha ee iPhone-kaaga? Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida ay u fududahay; meesha aad aadi laheyd si sawirada looga soo ceshado iyo waqtiga ay tahay inaad sidaas sameyso.
Xaqiiqdii adigu kaligaa ma aheyn qof si shil ah macluumaadkaaga uga tirtiray iphone-kaaga - markaan ka hadlayno iPhone-ka waxaan sidoo kale ka hadlaynaa iPad-ka ama xitaa iPod Touch, oo dhammaantood wadaaga barxad. In muddo ah waa suurtagal in la soo cesho sawiradaas ama fiidiyowyada aan si kadis ah u tirtirno ama in aan u sameyno si miyir qab ah ka dibna ka qoomameyno. Waxaa intaa dheer, uma baahnid wax gurmad ah; sawirka ayaa la keydin doonaa dhowr maalmood.
Sidoo kale, xusuusnow inaad marwalba haysan karto nuqul ka mid ah sawiradaada iyo fiidiyowyada adoo adeegsanaya adeegyada sida iCloud Drive ama Sawirada Google. Xaaladda dambe adiga kaydinta waa mid aan xad lahayn ilaa inta aynaan isticmaalin tayada asalka ah ee sawirada. Sidoo kale sii wadi doonaa in lagu keydiyo tayo sare. Taasi waxay tiri, si aad uga soo ceshato sawirro dhawaan laga tirtiray iPhone-kaaga, iPad ama iPod Touch waa inaad soo gashaa arjiga «Sawirada».
Markaad gudaha gasho, guji astaanta hoose ee tilmaamaysa albamka. Markaad shaashadaha wareejiso, bilow inaad hoos ugu rogto shaashadda oo aad hesho galka la yiraahdo "Waa la tirtiray". Markaad gudaha gasho waxaad kaheleysaa dhamaan waxyaabihii aad shilka ku masaxday ama aad jeceshahay inaad dhowr maalmood kadib soo kabato maxaa yeelay waad badashay maskaxdaada. Kaliya waa inaad doorataa sawirka ama fiidiyaha xiisaha kuu leh adiga dhagsii «Kabsasho» xagga hoose.
Ugu dambeyntiina, taas ayaan kuu sheegayaa waxaad haysan doontaa 30 maalmood inaad ku soo kabato maaddadan. Wali way sii jiri doontaa, galka "Dhawaan la tirtiray" isla markaana si toos ah ayaa looga tirtiri doonaa waqtigan ka dib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sidee looga soo kabtaa Sawirro dhawaan la tirtiray oo ku saabsan iPhone
Maqaalka soo socda: Sida loo shito iphone-ka loona damiyo
Waa maxay muujinta, cajiibka ah, cajiibka ah !!!! Cajiib
Ku jawaab Krls
Waa maxay qayb ka mid ah nalalka, laga soo bilaabo barnaamijka u beddelay shaashadda iphone-ka dabka, ma akhrin wax la mid ah.
Kama noqon kartid mid aad u jilicsan oo cabsi badan, xitaa sawirka uu iska dhigay Jedi.
Ku jawaab Antuan
Waxay kaloo sharxi kartaa sida weel biyo looga buuxiyo
Unicode bug wuxuu burburayaa barnaamijka iOS iMessage